Matoor Dhaqaajin Karaa Tawxiid dhaliyaha naaftada oo si toos ah u dhigay Soo saaraha iyo Warshad | Sidaada
Matoor dhaliyaha naaftada dhaqaaqi kara ayaa la dhigay
MUUQAAL EP-LT5SE / 4 EP-LT10SE / 7 EP-LT10SE / 9
Kordhinta ugu badan ee daqal m 4.5 7.2 9
Sare u qaadid Koronto Gacan ahaan Koronto
Xagal u jeestay Degree 340 180 340
Cadaadiska shaqada Psi (Max) 28 N / A 35
Culays Madaxa oo taagan kg (Max) 40 60 80
wadarta guud ee laambadaha w 4x400 4x400 / 4x1000 4x1000
Awoodda iftiinka Lumen / laambad 36000 36000-85000 85000
Joogtaynta Hz 50/60
Nolosha nalka Saacado 5000
Heerkulka shaqada ℃ 85
Tusmada ilaalinta iskuxirka IP54
Caymiska iftiinka Acres 5to7
Laydhka Tower Dielse Generator Set waa isjiidad, wiish wiish ah, koronto siiya, qalabka nalalka, nidaam isku dhafan, trailerku wuu kala duwanaan karaa wuxuu isticmaali karaa jirka baabuurka la jiidayo, sidoo kale wuxuu isticmaali karaa noocyada jira iyo noocyada gawaarida wax laga badalay oo leh qalab qaadista daaqada iyo nalka iyo qalabka kale ee si macquul ah ugu dhajiya trailer-ka, oo noqo nidaam dhameystiran oo nidaamka nalka la qaadan karo. Guryaha laydhka guurguura ayaa si fudud loogu qaadi karaa meelaha taraafikada laga furi karo isla markaana si ku-meel-gaadh ah loogu baahan yahay laydh waaweyn. Waa mid aad u habboon in la isticmaalo.
Taxanaha munaaraddii iftiinka EP-LT waa munaarad nalalka la qaadan karo is haysta oo leh 4x400W ama 4 * 1000W birta halide nalalka daadadka iyo saari karo 5KW / 10kw koronto-dhaliye naafto ah oo aan cod lahayn. Ku habboon meelaha shaqada yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, munaaradda laydhka 'EP-LT light light' waa mid aad u fudud in hal hawl wade uu qabto.
Si fudud ugu hawlgal: Badhanka casriga ah ee kala duwan si aad u xakamayso ama uga baxdo labada laambadood isla markaana aad ugu habboonaato inaad gacanta ku hagaajiso dhererka mastarka; (oo ay ku jiraan koronto-dhaliye, kiiska korantada iyo saldhig koronto-dhaliye). Way ku habboon tahay in la isu geeyo, la kala furfuro oo la raro. Si fudud ugu shaqee oo si wanaagsan ugu dabakh.
Baakadaha Kala-go'an: Qeyb kasta oo ka mid ah munaaradda nalalka si fiican ayaa loo baakadeeyay si looga hortago waxyeello kasta oo suurtagal ah.
Qaado naqshad qaabdhismeed badan oo naxdin leh, waxqabadka ka hortagga shoogga oo aad ugu kalsoonaan karto jawiga naxdinta badan ee soo noqnoqda;
Qaado waxyaabo daawaha iftiinka deegaanka ah iyo tikniyoolajiyad sare oo lagu buufiyo, biyuhu, aan boodh lahayn, antirust oo ku habboon in laga shaqeeyo deegaanka banaanka muddo dheer;
Ku habboonaanta elektromagnetic-ka oo aysan u horseedi karin faragelin shabakadda gudbinta;
Iftiinka oo dhami wuxuu qaataa wax bir ah oo tayo sare leh oo la soo waariday, tayo sare leh oo la isku halleyn karo oo si fiican uga shaqeeya jawiga adag.
Adeeg-Gawaarida Gaarka ah: Si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha kala duwan, waxaan jeclaan lahayn inaanu qaabeyno nalka kala duwan, awoodda, tirada nalka, dhererka mishiinka iyo koronto-dhaliye sida ay macaamiishayadu u codsadaan.
Baaxadda arjiga: aag ballaaran, iftiin dhalaalaya oo sarreeya, jiitaan gaar ah iyo qalab socodka ayaa si dhakhso leh loo geyn karaa, iyadoo la siinayo gurmadka musiibada habeenkii, xaaladaha degdegga ah, nalalka goobta dhismaha iyo awoodda degdegga ah
Hore: 5kw hawo qabow / aamusnaan ah oo qaboojiye naafto dhigay
Xiga: Shiinaha bamka biyaha